Kwaphela isikhathi esingaphezu konyaka, njengoba Sberbank waseRussia usethule uhlelo ibhonasi "Siyabonga kusukela Savings Bank," okuyinto ikuvumela ukuba buthelela ibhonasi amaphuzu futhi uzihlanganyele for izaphulelo, imikhiqizo kanye nezinsizakalo ezivela abalingani zohlelo.
Bonus amaphuzu anikwa konke ukuthengwa kwezimpahla nezinsiza, ngaphandle Ukudluliselwa, inombolo ngezidingo izinkokhelo kanye ukubuyiswa kwemali imali. Ingxenye kangcono abasebenzisi ibhonasi izinhlelo - wukuthi ezandayo abalingani kanye Izipesheli kuzo. Lena ngaphezu ukubala esezingeni 0.5% we isamba ikhokhwe ngesimo ibhonasi amaphuzu, "Ngiyabonga."
Indlela buthelela amabhonasi
Njengoba sekushiwo, ngaphezu amabhonasi uhlelo oluvamile lwe-Savings Bank bayakwazi ukubamba iqhaza umlingani izikhundla. Ngakho, kungenzeka ukuthola engaphezu kwengu-20% amabhonasi, "Ngiyabonga." Ibhonasi "Ngiyabonga kusukela Savings Bank" - isipho nice noma ubani ngokuvamile uholela amakhadi asebhange. Ukwenza ukuthenga evamile, ngeke kuphela ukusebenzisa zonke izinzuzo namalungelo Savings Bank ikhadi uhlelo lokukhokha, kodwa futhi uthole ibhonasi ukuthenga. Ongamthandi ukuthola izipho? Ngakho, Sberbank ibanika nsuku zonke ukuze umnikazi ikhadi lasebhange ngamunye. Futhi uba ilungu hlelo silula. Vele ubhalisele uhlelo SMS ngokusebenzisa i-ATM noma esigungwini. Ngaphezu kwalokho, izimo ezikhethekile Izinyanga ezintathu zokuqala ku ezicela ibhonasi amaphuzu, "Ngiyabonga."
"Ngiyabonga kusukela Savings Bank": kanjani ukuchitha?
Thina ngenkuthalo usebenzisa ukukhokhela izimpahla kanye namasevisi nge-credit card kunalokho ngokushesha buthelela ibhonasi amaphuzu, "Ngiyabonga kusukela Savings Bank." Indlela ukuchitha enenzuzo kakhulu amabhonasi ezinqwabelene? Chitha ibhonasi amaphuzu, ungaba abalingani hlelo, kuhlanganise ethandwa chain ezitolo elise kulo lonke elaseRussia. Enye yalezi abalingani - "Euroset". "Ngiyabonga kusukela Savings Bank" - uhlelo, lolu chungechunge ethandwa ezitolo isekela ngempumelelo. Kungenzeka Khokha "Euroset" ibhonasi amaphuzu kwaba kusukela ekuqaleni bokuba khona uhlelo ibhonasi "Siyabonga kusukela Savings Bank." Indlela ukuchitha lapha? Engingakusho nje manje ukukhokhelwa ikhadi umthengisi futhi bathi ufuna ngokugcwele noma kancane akhokhe amaphuzu ibhonasi. Ungakhokha ngale ndlela kuze kube 99% ukubaluleka izimpahla. Kungenzeka ukukhokha ingxenye amaphuzu, kanti bonke abanye - ngokheshi. Futhi esizeni uzakwethu efanayo ungakwazi ukuthenga izinto kusuka Retailers online futhi ngqo kusayithi ukukhokha amaphuzu "Ngiyabonga kusukela Savings Bank." Indlela ukuchitha ibhonasi yakho ngamaphuzu kwi-inthanethi? Webmoney kubenza bakwazi ukukhokhela ukuthenga ezitolo kakhulu, ukusebenza kwalesi simiso yemali. Kuyinto ngokwanele ukuba ukhethe indlela yokukhokha - e-imali, bese ukhetha i-amabhonasi, "Ngiyabonga." Abantu abaningi bayazibuza: 'Amabhonasi "Ngiyabonga kusukela Savings Bank" kanjani ukuchitha kumasevisi okuxhumana? " Ngeshwa, lokhu akunakwenzeka. Abakwazi nje ukuchitha ku izimpahla kanye kuphela abalingani zohlelo. Uhlu abalingani njalo olusha kanye iziphakamiso ezintsha nezithakazelisayo, ukuze wonke umuntu bazikhethele uzakwethu engcono ukwenza ishibhile.